Suuq-geynta Gudaha ee Ganacsiga Yaryar | Martech Zone
Arbacada, Maarso 20, 2013 Talaado, Maarso 19, 2013 Douglas Karr
Teknolojiyaddu waxay sii wadaa inay fursado aan caadi ahayn siiso ganacsiyada yaryar. Maaddaama awoodda xisaabinta iyo aaladaha ay sii socdaan horumarka, kharashyada ayaa sii wadaya inay hoos ugu dhacaan guddiga. Dhowr sano ka hor, qalabka wax lagu raadiyo iyo barnaamijyada bulshada ayaa kumanaan kun oo doolar ah bil kasta waxaana heli kara oo keliya shirkadaha awooda inay maalgashadaan. Berri waxaan kala hadli doonaa koox xirfadlayaal ganacsi yaryar ah qalab ku saabsan caawinta iyo UpCity waa mid ka mid ah aaladaha ku jira liiska ugu sareeya.
UpCity waxaa ku shaqeeya barnaamijkooda Pathway ™. Pathway ™ waxay qiimeysaa muuqaalka tooska ah ee meheraddaada, waxayna siisaa hab fudud, tallaabo-tallaabo ah si kor loogu qaado muuqaalkaaga tooska ah iyada oo loo marayo hagaajinta mashiinka raadinta, maareynta sumcadda, baloog garaynta, iyo liis gareynta liistada maxalliga ah.
UpCity waa madal adag oo SEO softiweer iyo barnaamij waxbarasho oo ku siineysa warbixin iyo aragti iyo qorshe talaabo talaabo ah oo kugu hagaya guusha suuqgeynta internetka.
Kordhinta Websaydhka - U hagaaji websaydhkaaga macaamiisha marka hore iyo matoorada raadinta labaad.
Isku-hagaajinta Degaanka - Hubso inaad haysato liisas nadiif ah oo sax ah oo ku yaal bogagga maxalliga ah sida Google+ Local, Yelp iyo kuwa kale oo badan.
Wareegida Warbaahinta Bulshada - Abuur joogitaan bogagga warbaahinta bulshada sida Twitter iyo LinkedIn oo baro sida loogu adeegsado abuuritaanka hoggaanka.
Maareynta Raashinka - Fahmitaan waxa dadku ka leeyihiin ganacsigaaga iyo tartankaaga ee goobaha dib u eegista iyo baraha bulshada isla markaana uga jawaab si ku habboon.
hubkaa - Baro sida baloog gareynta ay saameyn weyn ugu yeelan karto muuqaalkaaga internetka iyo qaar ka mid ah aasaasiga u ah qorista wax qorista.
Tags: hubkaahagaajinta maxalliga ahraadinta maxalliga ahhagaajinta raadinta deegaankamaxalliga ahmaaraynta sumcadwarbaahinta bulshadahagaajinta warbaahinta bulshadadejinta shabakadda